उपत्यकामा खोलिएको कोठीमा ग्राहकलाई पासकोड ! प्रहरी छड्केमा यस्तो देखियो - dautarimedia.com
उपत्यकामा खोलिएको कोठीमा ग्राहकलाई पासकोड ! प्रहरी छड्केमा यस्तो देखियो
काठमाडौ । ललितपुरमा सोमवार प्रहरीले फेला पारेको एक घटनाले प्रहरीनै अचम्मित परेको छ । भारतका कोठीहरुमा जस्तै ललितपुरमा ५० हजार रुपैया मासिक भाडामा अपार्टमेन्ट लिएर कोठी संचालन गरेको फेला परेको हो । युवतीहरुलाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर त्यहाँ लगिने गरेको अनुसन्धानवाट खुलेको छ ।
Previous: एकाबिहानै नेपालका चर्चित हाँस्य कलाकारको निधन, सिङ्गो कला क्षेत्र बन्यो स्तब्ध
Next: उपत्यकामा खोलिएको छ कोठी, ग्राहकलाई भित्र छिर्न पासकोड व्यवस्था